अब कन्डमको सट्टा प्रयोग गर्नुहोस क्रिम, झन्झट साफ !
Friday, 23rd February, 2018
सबैको चासो : मेरो गुनासो
एजेन्सी/ बाँदरमा गरिएको परीक्षण सफल भएसँगै बैज्ञानिकहरुले पुरुषका लागि नयाँ क्रिमको उत्पादन गरेका छन् । जुन क्रिमले गर्भनिरोधकका रुपमा काम गर्नेछ । त्यो क्रिमको माध्यमबाट पुरुषमा हुने शुक्रकिटको प्रवाहलाई रोक्न सक्ने बताइएको छ ।
उक्त क्रिम पुरुषको त्यो ट्युबमा हाल्नुपर्छ जहाँबाट शुक्रकिट लिङ्गतर्फ जाने गर्छन् । यो गर्भनिरोधक क्रिम ल्याउने कम्पनीका अनुसार दुई वर्षको परीक्षणपछि यसले काम गरिररहेको तथ्य पुष्टि भएको हो । यो परीक्षण बाँदर प्रजातिमा कामसमेत गरेको कम्पनीको दाबी छ । केही वर्षमै यो पुरुषहरुको प्रयोगका लागि ल्याउन सकिने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ ।
हाल पुरुषहरुमा दुई तरिकाबाट गर्भनिरोधक गर्न सकिन्छ । एक कण्डमको प्रयोग र अर्को नसबन्दी । क्रिमवाला विधि नसबन्दीजस्तै भएको कम्पनीको दाबी छ । शोधकर्ताले नसबन्दी विपरीत पुरुषले बच्चा जन्माउने फैसला बदल्न चाहे यो क्रिम उपयोगी बन्नसक्ने बताएका छन् ।
उत्कृष्ट १०० उत्प्रेरक भनाईहरू, जसले तपाईकाे जीवन वदल्न सक्छ !
उत्कृष्ट १०० उत्प्रेरक भनाईहरू, जसले तपाईकाे जीवन वदल्न...
जानी राखौं : पानी कति पिउने ? कति कति बेला पिउने ?
जानी राखौ : कति बेला र कति पटक सम्भोग गर्दा राम्रो
यौन सन्तुष्टि कसरी प्राप्त गर्ने ?
यस्ता छन् अनुहारको दाग हटाउने प्राकृतिक उपाय
यसरी घटाउन सकिन्छ बोसो
मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधी तस्करसंग मिलेको आरोप !
मकवानपुर । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका जन प्रतिनिधीलाई तस्करसंग मिलेको आरोप लागेको छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर २, ७...
आज बेलुका ५ः५५ मा चन्द्रग्रहण, के गर्नु हुन्छ - के गर्नु हुदैन ?
काठमाडौं । आज बेलुका ५ बजेर ५५ मिनेटमा खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने भएको छ । नेपाल पञ्चांग निर्णायक समिति अनुसार,...
के छापे आज हेटौंडाका दैनिक पत्रिकाले ?
मकवानपुर । आज मकवानपुरको हेटौंडाबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरुले मकवानपुरको हेटौंडा प्रदेशको अस्थायी राजधानी...
यस्तो रह्यो प्रदेश ३ को ऐतिहासिक प्रदेशसभा !
मकवानपुर । प्रदेश नम्बर ३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडामा आज प्रदेशसभाको बैठक बसेको छ । बैठकको सुरुमा प्रदेशका...
किशोरीको भविष्य उज्ज्वल बनाउन सहजकर्तालाई तालिम
मकवानपुर । मकवानपुर र रौतहटमा किशोरीको भविष्य निर्माणमा सघाउ पु¥याउने सहजकर्तालाई हेटौंडामा तालिम दिइएको छ ।...
प्रदेश सांसदलाई हेटौंडाको होटलमा खानपीनमा विशेष छुट !
मकवानपुर । आम सर्वसाधारणलाई होटलमा खान बस्न महङ्गो छ । तर प्रदेशको राजधानी हेटौंडा बनेपछि हेटौंडाका...
शिवम् सिमेन्टलाई वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिने सरकारको निर्णय
मकवानपुर । सरकारले शिवम् सिमेन्ट उद्योगलाई उद्योग सञ्चालनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।...
पानी स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ भन्ने कुरा हामीलाई थाह नै छ । तर कतिवेला कति मात्रामा पानी पिउने भन्नेकुरा...
पैदलयात्रुका जुत्ता किन पालिस गदैछन् काङ्ग्रेसका यी नेता ?
काठमाडौ । सहिद दिवसको अवसरमा ‘देशको राजनीति शुद्ध पार्ने’ भन्दै कांग्रेस नेताहरुले सडकमा बसेर जुत्ता पालिस...
श्रीमतीको हत्या गर्ने मकवानपुरका यी कस्ता श्रीमान् ?
मकवानपुर । श्रीमान् श्रीमतीका अनेक उपमा छन् । श्रीमान् श्रीमतीलाई एक रथका दुई पाङ्ग्रा पनि मानिन्छ । विवाहका...
के छापियो आजको अखबारमा ?
मकवानपुर । प्रदेश ३, काठमाडौंबाट आज बुधबार प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीलाई मुख्य...
प्रहरी इन्काउन्टरमा मनोज पुन र उनको सहयोगीको मृत्यु
मकवानपुर । गुण्डा नाइके मनोज पुन प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका छन् । पुन गएराती प्रहरी इन्काउन्टरमा रुपन्देहीको...
सम्पादक चौलागाईलाई जागरण तुखबर पत्रकारिता पुरस्कार
मकवानपुर । मध्यस्थता साप्ताहिक तथा मध्यस्थता डटकमका सम्पादक शिव चौलागाईंलाई जागरण तु खबर पत्रकारिता पुरस्कार...
मकवानपुरगढीमा जनताकै विरुद्धमा जनप्रतिनिधि, प्रशासनदेखि गुट-उपगुटकोसम्मको मिलोमतो भएको आरोप
चन्द्र घलान मकवानपुर । कुनै पनि जनप्रतिनिधिले जनताको ईच्छा र हितविपरितको कार्य गर्नु जनताको लागि घोर अन्याय...
सम्पति विवरण नबुझाउने १९ हजार बढी निजामति कर्मचारी
मकवानपुर । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार मुलुकका १९ हजार १ सय ३४ जना कर्मचारीले तोकिएको समयमा सम्पति विवरण...
आज ६८ औं प्रजातन्त्र दिवस मनाइदैं
मकवानपुर । आज ६८ औं प्रजातन्त्र दिवस प्रजातन्त्र स्थापना भएको दिनको सम्झनामा मकवानपुर लगायत देशभर विभिन्न...
प्रदेश ३ मा मन्त्री छान्न मुख्यमन्त्री पौडेल र प्रधानमन्त्रीबिच भेटवार्ता
मकवानपुर । मन्त्रीपरिषद बिस्तारबारे मुख्यमन्त्री पौडेल र प्रधानमन्त्री ओलीको भेटवार्ता हेटौँडा,४ फागुन,...
ललितपुरका सांसद भन्छन्,‘ प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा उपयुक्त’
मकवानपुर । वाम गठवन्धनको तर्फबाट ललितपुर जिल्लाबाट विजयी भएका सांसदहरुले प्रदेश नंबर ३ को राजधानी हेटौँडा...
कृष्णप्रसाद ढुङ्गाना (प्रबन्ध निर्देशक)
शिव चौलागाईं (सम्पादक)
मदनकुमार दाहाल (कानूनी सल्लाहकार )
मध्यस्थता मिडिया प्रा.लि
हेटौंडा ५, मकवानपुर
कम्पनि दर्ता नम्बर : १६६९५९
सूचना विभाग दर्ता नम्बर : ७०२/०७४/७५
Copyright 2018 Madhyasthata. All rights reserved. Developed By Sajilo Technology